Daawo Mucjiso: Magaalo guureysa oo Leh guryo iyo Masaajiddo oo lagu arkay Gobolka Hiiraan | Puntland
Daawo Mucjiso: Magaalo guureysa oo Leh guryo iyo Masaajiddo oo lagu arkay Gobolka Hiiraan
Dadka ku nool tuulo lagu magacaabo qoryaale oo qiyaastii 18-KM u jirta dagmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ay sheegeen in shalay gabal dhicii ay arkeen wax u eg magaallo hawada sare ku socota oo guureysa taasi oo leh guryo dabaqyo ah iyo masaajiddo.
Shalay gabal dhici xili roob uu ka da’ay tuulada qoryaale ayaa dadka tuulada ku nool waxa ay mar quraa hawada sare ka arkeen magaalo dhan oo guureysa taasi oo leh dabaqyo nalal ay ka daaranyihiin iyo masaajiddo iyo weliba sidoo kale bad weyn oo magaalada dhinaceeda ku taala.
Dadka waxgaradka ah ee tuulada ku nool iyo macalimiin dugsi mashaa’iq ayaa warbaahinta u xaqiijiyay mucjisadaan shalay gabal dhicii lagu arkay tuulada qoryaale oo hoostagta dagmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan.
Masaajidda la arkay ayaa waxaa ka daarnaay nalal la arki karay waxaana arrintaan ay dadka deegaanka ku noqotay mucjiso rabbaani iyadoona macalimiinta dusgiyada qur’aabka ay bilaabeen aqrinta qur’aanka kariimka qowlkii eebbe.
Sidoo kale mucjisadaan waxaa lagu arkay tuullooyin kale oo ku teedsan jalalaqsi balse gudaha magaalada jalalaqsi dadka ku nool waxa ay sheegeen in aysan arkin mucjisada balse ay maqleen in tuulada qoryaalle laga arkay mucjisadaan rabbaaniga ah.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in haddii geed la fuulo oo la isku dayo in la.arko ay qarsoomeyso magaalada guureysa balse haddii dhulka aad usoo dagto aad si toos ah u arki kareyso magaalada hawada sare ku socota.
Waa markii ugu horeeysay oo la arko magaalo hawada sare ku socota oo leh dhismayaal dabaqyo ah masaajid iyo weliba bad waxaana dadka ay hadal hayan mucjisadaan lagu arkay dhulka soomaaliyeed.
SUBXANALLAH: Magaalo guureysa oo Leh guryo iyo Masaajiddo oo lagu arkay deegaan Hoostaga Dagmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan.